Maitiro ekunyorera katsamba kubva ku lock screen ye iPhone yedu kana iPad | IPhone nhau
Mumakore apfuura, takaona mafambiro akaita Apple kugadzirisa mashandiro emamwe mafomu anga agara aripo, asi ivo vaiita kunge vasiiwa neApple. Muenzaniso wakajeka unowanikwa mune maNotes application, Tsamba, Zviyeuchidzo ... Asi pasina kupokana Manotsi ndiwo akagashira mabasa mazhinji.
Kutenda kuApplication manyorerwo, tinogona kugadzira zvinyorwa zvekutenga, kuita zvirevo nemunwe wedu kana Apple Penzura paIpad, wedzera mifananidzo kune zvinyorwa, maka manotsi seanofarira, gadzira makoramu ... Isu takaonawo sei iyo yekuvhara skrini, nekuda kwe iyo Control Center, mashandiro ayo akawedzerwa. Muchikamu chino tinokuratidza maitiro ekugadzira chinyorwa kubva kukiya skrini ye iPhone yedu kana iPad.
Kwemakore akati wandei, Apple yakatitendera kuti tiwedzere mapfupi kune zvinoshandiswa kana mabasa atinonyanya kushandisa. Kubva kuControl Center, hatigone kungobatidza tochi, kuwedzera alarm kana kuwana kamera, asi isu tinokwanisa zvakare kuwana iyo Yekushandisa application kudzora zvakabatana zvishandiso, kumedza yakaderera kudyiwa, rekodha skrini yechiteshi chedu, tarisa kodhi yeQR, shandisa iyo Inokudza girazi basa, wedzera izwi manotsi, scan magwaro ... kuwedzera pakukwanisa kugadzira zvinyorwa kana kuzviwana.
Fambisa iyo Anoteerera app kubva kukiya skrini
Mukati meZvirevo, tinopinda Kudzora nzvimbo uye tinya pa Tsika.
Tevere, isu tinongofanirwa kudaro tora pane + chiratidzo MaNote, ari muChikamu cheMazhinji ekudzora, kuitira kuti itange kuratidzwa muDirect Center.
Kubva panguva ino, uye pasina kuvhura yedu iPhone kana iPad, tinogona nyora chinyorwa muApple app
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekunyorera katsamba kubva ku lock screen ye iPhone yedu kana iPad
Mari zvaunotenga muchitoro chepamutemo cheApple pasina mubereko